Kulan lagu horumariyo kubadda koleyga Soomaaliya oo Dubai lagu qabtay | Somchess.net
You are here : Somchess.net » wararka » Kulan lagu horumariyo kubadda koleyga Soomaaliya oo Dubai lagu qabtay
Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Koleyga Cabdulaahi Nuur Maxamed Cadaani ayaa kulan looga hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta Tababarayaasha kubadda kolayga Soomaaliyeed la yeeshay Macalin Cumar Cabduqadir Baarajab.
Kulanka ayaa ka dhacay magaalada Dubai ee isu tagga imaaraadka carabta oo uu guddoomiye cadaani kaga qayb galay shirkii wadamada jaamacadda Carabta, waxaana kulanka looga hadlay sidii tababar loogu qaban lahaa Tababarayaasha kubadda Koleyga dalka.
Guddoomiye Cadaani oo kulanka ka warbixyay ayaa sheegay in XSKK oo ku jira qorshahiisa horumarinta kubada koleyga isla markaana uu sare u qaadayo heerka Aqooneed ee Tabarayaasha iyo Garsoorayaasha kubadda koleyga uu Bishii Oktoober ee sanadkan Tababare Baarajab u diray tababar lagu qaadanayay shahaadada Tababarka Tababarayaasha ee Fiba (FIBA Couching Instructor) oo ka dhacay dalka Benin iyadoo Tababare Baarajab ku guulaystay in uu ka mid noqdo Tababarayaasha FIBA ee tababarka bixin kara.
Guddoomiye Cadaani ayaa inta ku daray in Tababare Baarajab ay isla garteen in uu dalka yimaado isla markaana uu bixiyo tababar sare loogu qaadayo aqoonta Tabarayaasha qaybaha kale gedisan ee kubada kolega heer gobol heer degmo iyo heer iskuul si sare loogu qaado Aqoonta Tababaryaasha kubada koleyga Soomaaliyeed.
Tababarkan ayaa la filayaa in Caasimadda dalka Muqdsho lagu qabto bilowga sanadka soo socda 2016, waxaana ka soo qeyb gali doona macalimiin kasocota gobolada dalka.
« 25th World Senior Chess Championship 2015: Round 10
Kaalintii jaaliyadda Atlanta ku lahayd furitaanka safaaradda Soomaaliya ee USA + Sawirro »